Inkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa nguMongameli Cyril Ramaphosa, Ephalamende, eKapa | The Presidency
Inkulumo Echaza Isimo Sezwe eyethulwa nguMongameli Cyril Ramaphosa, Ephalamende, eKapa
Somlomo wesiGungu Sikazwelonke, Nks Thandi Modise,
Sihlalo woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe, uMnu Amos Masondo,
IPhini likaMongameli, u-David Mabuza,
IJaji Eliyinhloko, u-Mogoeng Mogoeng, kanye nawo wonke amalungu ahloniphekile oPhiko Lwezobulungiswa,
UMongameli Waphambilini, uMnu Thabo Mbeki noNkk Mbeki,
UMongameli Waphambilini, uMnu Kgalema Motlanthe noNkk Motlanthe,
IPhini likaMongameli Laphambilini u-FW de Klerk no Nkk De Klerk,
Somlomo Waphambilini uNks Baleka Mbete noMnu Khomo,
UMongameli wePhalamende Lamazwe ase-Afrika, uMnu Roger Nkodo Dang,
Omele abesifazane baseNingizimu Afrika KuNhlangano Yezizwe, Nks Anne Githuku-Shongwe,
Isithwalandwe, uMnu Andrew Mlangeni,
UMongameli weNhlangano Yohulumeni Basekhaya yaseNingizimu Afrika kanye neziMeya Zemikhandludolobha,
UMphathi Webhange Lombuso laseNingizimu Afrika, uMnu Lesetja Kganyago,
Abaholi bezinhlangano zezenkolo,
Abaholi bezikhungo zezemfundo nezocwaningo,
Amalungu ahloniphekile esiGungu Sikazwelonke,
Amalungu ahloniphekile oMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe,
Sekuyiminyaka engama-30 selokhu u-Nelson Rolihlala Mandela akhululwa ejele i-Victor Verster, okungumzuzu emlandweni wethu ogqame kakhulu kuneminye inkululeko eke yaba nawo njengamanje.
Ngesikhathi eme kuvulandi ophezulu eHholo Ledolobha laseKapa ukuzokhuluma nezinkumbi zabantu ababefike ngezinkulungwane ngezinkulungwane ukuzomamukela, wathi:
'Indlela yethu eya enkululekweni ayijiki. Akumele sivumele ukusaba kume endleleni yethu.'
Njengamanje, emva kweminyaka engama-30, sisaqhubeka nokuya phambili ukwenza ngcono izimpilo zabantu bakithi, sisabhekana nezingqinamba, sisabekezelela izikhathi ezinzima, nathi-ke angeke sivumele ukusaba kume endleleni yethu.
Kumele siphokophele phambili, singavumeli ubunzima nokungabaza kusiphambukise.
Njengoba sihlangane ukuzobuka isimo sezwe lethu, sihlanganyele nomndeni ka-Basil February, iqhawe lenkululeko elinesibindi elashona eZimbabwe emkhankasweni i-Wankie ngonyaka we-1967.
Eminyakeni engama-50 indawo lapho elele khona, njengamanye amaqabane, kuze kube manje, ayaziwa.
Igalelo lakhe, ukuzinikelela kwakhe, akukaze kushaywe indiva.
Kusihlwa nje, sihlangene lapha sithotshwe izinkumbulo zalawo madoda nabafazi abanikelela ngezimpilo zabo enkululekweni yethu, sisazi kahle isibophezelo esikhulu esisiphethe sokufezekisa amaphupho abo.
Kunezikhathi la siphelelwa khona, kunezikhathi lapho senza amaphutha, kodwa siyaqhubeka nokungashukumiseki empokophelweni yethu yokwakha umphakathi okhululekile, olinganayo nonokuthula.
Umlando wethu usitshela ukuthi uma sibumbene ngokuthula nangokukholwa, singanqoba zonke izithiyo futhi siguqule izwe lethu libe indawo lapho sonke sizizwa sikhululekile, siphephile futhi sizizwe sintofontofo.
Kungaloyo moya njengamanje sizobhekana nesimo samanje.
Izwe lethu libhekene neqiniso elibabayo.
Umnotho wethu awukakhuli ngezinga elifanelekile eminyakeni engaphezu kweyishumi.
Noma imisebenzi yakhiwa, izinga lokungasebenzi liyaqhubeka nokukhuphuka.
Ukusimama komnotho wethu kumile ngenxa yokuthi ukushoda kwamandla ogesi okubelesele kuphazamisa amabhizinisi kanye nezimpilo zabantu.
Amabhizinisi amaningana kahulumeni asosizini, nezimali zikahulumeni wethu zingaphansi kwengcindezi enkulu.
Yinina, abantu baseNingizimu Afrika, enithwele lomthwalo, enibhekene nezindleko zokuphila ezikhuphukayo, ukungabikho kwemisebenzi, ukungakwazi ukubalekela inhlupheko, ukungakwazi ukubonisa okwazi ukukwenza.
Okwamanje, ngasikhathi sinye, kunenye ingxenye eqinisweni lethu.
Iqiniso lenani labantu abasha abafinyelela kalula kwezemfundo ukudlula phambilini futhi abathola imiphumela elokhu iba ngcono.
Iqiniso lezingane eziyisigidi ezi-2.4 ezisezindaweni zokukhulisa izingane ezincane nasezinkulisa.
Balinganiselwa kumaphesenti angama-81 abafundi abaphase umatikuletsheni ngonyaka odlule, nenani elandayo eliqhamuka ezikoleni zasemakhaya naselokishini.
Ngale mpumelelo enkulu, sishayela ihlombe Abafundi bangowezi-2019.
Iqiniso futhi ukuthi kunabafundi abayizi-720 000 abathole ukuxhaswa nguhulumeni ukufunda emakolishi amakhono nobuchwepheshe kanye nasemanyuvesi ngonyaka owedlule.
Sikhuluma ngabantu baseNingizimu Afrika abangaba yizigidi eziyi-6.8 abasaziyo isimo sabo seSandulelangculazi, bangaba izigidi ezi-5 abantu asebeqaliswe imishanguzo yokudambisa iSandulelangculazi kanye nabayizigidi ezi-4.2 abantu ngenxa yalokhu, ubungako begciwane egazini labo, abubonakali.
Lezi akuzona izibalo nje.
Lezi izimpilo zabantu bakuleli ezenziwe ngcono.
Iqiniso esinalo futhi kungokunye esinamandla okukwenza ngokungenamkhawulo.
Umhlaba onothe ngokumbiwa phansi kanye nokuhlukahlukana kwempilo yezitshalo nezilwane esingawulinganisa nengcosana emhlabeni.
Isizinda esijulile somnotho, izingqalasizinda ezibanzi, imithetho enengqondo kanye nezikhungo eziqinileyo.
Abantu abanothile, abahlukahlukene, abasebasha futhi abanamakhono.
Ngalo busuku, sihlanganyele kanye noZozibini Tunzi, ukwethwesa kwakhe isicoco sikaZime Womhlaba kuyisikhumbuzo kwamandla esinawo ukuzuza okukhulu simelene nezingqinamba.
Samukela futhi ukaputeni wamaBhokobhoko (Springbok) u-Siya Kolisi, owahola iqembu elinempokophelo nelibumbene laseNingizimu Afrika ukuba Abanqobi Bomhlaba Bebhola Lombhoxo ngowezi-2019.
Kulobu busuku sihlanganyele nomunye umuntu osemncane omangalisayo, uNksz Sinoyolo Qumba, umfundi webanga le-11 wase-Lenasia South, ochithe isikhathi esiningi sayizolo engisiza ukubhala leNkulumo Ngesimo Sezwe.
Ubuhlakani bakhe, ulwazi lwakhe ngomphakathi, intshisekelo yakhe kanye nenkuthalo yakhe kunginika ukuziqhenya okukhulu ngekusasa lale lizwe.
Ezinkulumweni zami zokuqala ezimbili ezibhekiswe esizweni ngakhuluma kabanzi ngesidingo sokuhlangana komphakathi, kanye nesibophezelo esikhulu esisemahlombe ethu njengohulumeni ukuqhubela phambili ukusebenzisana kanye nokuvumelana.
Ngonyaka we-1994 sakhetha indlela yokuxoxisana, ukuzehlisa nokuvumelana okunokuthula, kunenzondo nokubuyisela.
Umlando wethu kanye nesidlula kukho njengamanje kusifundise ukuthi uma sifuna ukuphumelela kulokhu esizibekele ukukwenza, kumele sibheke kulokhu okuhlanganisayo kunalokho okuhlukanisayo.
Amandla amakhulu entando yeningi labantu yomthethosisekelo wethu, nesizathu esenza ubekezelelwe, ingenxa yokuthi sikwazile ukuqhubela phambili imifelandawonye esabalele nezivumelwano zomphakathi, kungaba namabhizinisi, abasebenzi, abantu abanentshisekelo efanayo noma umphakathi jikelele.
Ukufika esivumelwaneni nokwakha izivumelwano zomphakathi akukona ukutshengisa ubuthaka. Kuyingqikithi yokuthi singobani, njengabantu baseNingizimu Afrika.
Yingakho eminyakeni emibili edlule besisebenza kanzima sifuna ukuqhubela phambili futhi sakhe isivumelwano ngohlelo lwethu lokutakula umnotho.
Enkulumweni yokugcotshwa kwakhe mhla ziyi-10 kuNhlaba ngonyaka we-1994, uMongameli u-Nelson Mandela wathi:
“Namuhla singena esivumelwaneni sokuthi kumele sakhe umphakathi wonke umuntu waseNingizimu Afrika, abansundu nabamhlophe, bazokwazi ukuhamba ngokuziqhenya, ngaphandle kokwesaba ezinhliziyweni zabo, baqinisekiswe ngelungelo labo abangeke baphucwe lona lesithunzi somuntu.”
Lo hulumeni usalokhu uzinikele ngokungephikiswe ukweseka leso sivumelwano.
Isivumelwano esimiswe enhlosweni yamasu oHlelo Lokuthuthukisa Izwelonke, okuhloswe ngalo ukuqeda inhlupheko nokunciphisa ukungalingani ngonyaka wezi-2030.
Ake sivume ngokungananazi ukuthi uhulumeni angeke axazulule izinselelo zomnotho wethu eyedwa.
Noma besingahlanganisa zonke izinsiza esinazo, siphinde sizifake ezindlekweni ezinkulu zemali yomphakathi, angeke sisodwa sakwazi ukuqinisekisa umsebenzi kubantu abayizigidi abangasebenzi.
Esesikuzuzile, sikuzuze sisonke.
Eminyakeni emibili edlule - selokhu ngaqala ukuma lapha ukuzokwethula Inkulumo Ngesimo Sezwe - sesisebenzile ukwakha izivumelwano phakathi kwabantu baseNingizimu Afrika ukubhekana nezinselelo eziphambi kwethu.
NgeZingqungquthela Zemisebenzi, silethe umsebenzi, ibhizinisi, uhulumeni nemiphakathi bendawonye ukuthola izisombululo kulolu sizi lokuswelakala kwemisebenzi, futhi siyaqhubeka ukuhlangana ekuqaleni kwanyangazonke, iPhini likaMongameli kanye nami ukususa izithiyo nokuqhuba phambili izingenelelo ezizokonga futhi zakhe imisebenzi.
Sesihlangane ndawonye, njengohulumeni nomphakathi, imiphakathi nezinhlangano zezenkolo, ukubhekana ngqo nenye inselelo enkulu ewudlame olwenziwa amadoda kwabesifazane.
Sesihlanganise abezamabhizinisi, ezabasebenzi nohulumeni ukuza namasu amahle alezi zimboni ezinamandla amakhulu okukhula.
Sihlanganyele ndawonye njengemikhakha eyehlukene kahulumeni, njengezinhlaka ezehlukene zombuso, njengezinhlangano zamabhizinisi kanye namaqembu omphakathi ngaphansi kohlelo olusha lokuthuthukiswa kwesifunda oluyisisekelo sokushintsha indlela esibhekana ngayo nokuthuthukiswa kwasekhaya.
Besilokhu sakha izivumelwano zomphakathi ngoba kungokubambisana nokusebenzisana ukuthi singaqhubekela phambili.
Sindawonye, eminyakeni emibili edlule, sisebenze ukuletha uzinzo emnothweni wethu nokwakha isisekelo sokukhula.
Sesibenenhloso ukuphinda sakhe izikhungo sibuye sisuse izithiyo kutshalomali.
Sibhekane ngendlela efanele ukumelana nokubanjwa kombuso ngobhongwane nokulwa nenkohlakalo.
Siqhubekile sathuthukisa ukufinyelela emfundweni, sathuthukisa izinga kwezokunakekelwa kwempilo labhekana nezidingo zabantu abampofu.
Njengamanje, lokho akukeneli.
Akukaze kwenela ukukhulula umnotho wethu efeni elibi lomlando wethu, nasemaphutheni thina ngokwethu esiwenzile.
Akukaze kwenela ukuzisindisa emiphumelweni emibi yokucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga, nasemnothweni ontengantengayo nowehlayo emhlabeni jikelele.
Ngakho-ke sizithola namuhla sikumzuzu wokuzinqumela.
Zinganqotshwa izinkinga ezingapheli eziningi nezinzima ezibhekana nathi, noma singabhekana ngqo nazo, ngezixazululo nokuzimisela kanye nokwenza.
Njengoba sikhetha ukubhekana ngqo nezinselelo zethu, umsebenzi wethu osheshayo, obalulekile nophelele ukubeka umnotho wethu emgudwini wokukhula komnotho okubandakanya wonke umuntu.
Ngaphandle kokukhula angeke kube khona imisebenzi, ngaphandle kwemisebenzi angeke kube khona ukuthuthukiswa okunenjongo ezimpilweni zabantu bethu.
Ngakho-ke leNkulumo Echaza Isimo Sezwe imayelana nokukhula komnotho okubandakanya umuntu wonke.
Imayelana nezinqubo ezibucayi esizozithatha kulo nyaka ukwakha umbuso onekhono nokubeka umnotho wethu endleleni yokululama.
Kulo nyaka, silungisa izisekelo.
Siqhubekisa izindawo ezibucayi zokukhula.
Futhi siqinisekisa ukwenza kahle kakhulu ekuhleleni nasekusebenzeni kuhulumeni.
Ngaphezu kweminyaka eyishumi, abantu baseNingizimu Afrika bekumele babhekane nemiphumela yobunzima bokulethwa kukagesi.
Sengikhulume kabanzi ngendima ebalulekile edlalwa u-Eskom emnothweni wezwe lethu nasezimpilweni zabo bonke abantu baseNingizimu Afrika.
Ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kwezinyanga ezimbalwa ezedlule kube nomthelela ebuthakathakeni bezwe lethu.
Kuvele kwabuyisela emuva yonke imizamo yethu yokuphinde sakhe umnotho nokukwakha imisebenzi.
Ngaso sonke isikhathi uma kwenzeka, kuphazamisa izimpilo zabantu, idala ukukhungatheka, ukubambezeleka, nobunzima.
Kumnyombo wayo, ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kungumphumela ongenakugwenywa wokuhluleka kuka-Eskom eminyakeni eminingi - ngenxa yesikweletu, ukuntuleka kwamandla kanye nokubanjwa kombuso ngobhongwane - ukunakekela iziphehlimandla zawo.
Iqiniso okuzomele silamukele ukuthi ukuze u-Eskom akwazi ukulungisa okubalulekile okudingekayo ukwenza ngcono ukuthembeka kokuthunyelwa kogesi, ukucishwa kogesi ngenhloso yokuwonga kuzohlala kuyinto engenzeka esikhathini esizayo.
Lapho ukucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga kungenakugwenywa, kumele sikuthathe ngendlela engaqageleka futhi kunciphise ukuphazamiseka nezindleko ezimbonini nasemakhaya.
Ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, njengoba u-Eskom usebenza ukubuyisa amakhona akhe okusebenza, sizobe sisebenzisa izindlela ezizoguqula ngendlela ebaluleke kakhulu umgudu wokuphehlwa kogesi ezweni lethu.
Sithatha lezi zinyathelo ezilandelayo ukukhuphula ngokushesha okukhulu umthamo wokuphehlwa kukagesi ngaphandle kwakwa-Eskom.
Isahluko sama-34 sokuZimisela Kongqongqoshe sizokhishwa maduze nguNgqongqoshe Wezezimbiwa Namandla ukunikeza ukusebenza koHlelo Oludidiyelwe Lwengcebo lwangonyaka wezi-2019, oluzonika amandla ukuthuthukisa umthamo wezindlela zokugcina ugesi usuka emandleni avuselelwayo, igesi yemvelo, ugesi okhiqizwa kusetshenziswa amanzi, ukugcinwa kwebhethri kanye nelahle.
Sizoqala ukuthola ugesi ophuthumayo ezinkampanini ezizokwazi ukuletha ugesi lapho okumele uthunyelwe khona esikhathini esiyizinyanga ezi-3 kuya kweziyi-12 kusuka kuvunyiwe.
UPhiko Olulawula Ezamandla luzoqhubeka nokubhalisa imininingwane yabazokhiqiza ugesi ngesilingaso esincane ukuzisebenzisela wona, lokhu okungadingi ilayisense.
UPhiko Olulawula Ezamandla luzoqinisekisa ukuthi zonke izicelo zabasebenzisa ezentengiso kanye nezimboni zokukhiqiza ugesi ukuzisebenzisela wona ngaphezu kwesilinganiso esingu-1MW zicutshungulwa esikhathini esibekiwe esiyizinsuku eziyi-120.
Kumele kuphawuleke ukuthi manje akusenamkhawulo emthamweni osufakiwe ongaphezu kwesilinganiso esingu-1MW.
Sizophinde sivule ihlandla le-5 lokufaka izicelo zogesi ovuselelekayo zaBakhiqizi Bogesi Abazimele nokusebenzisana nabakhiqizi ukuze kusheshe kuqedwe imisebenzi yangehlandla le-4.
Sizoxoxisana ngezivumelwano zokuthenga ugesi wokwengezela ukuze sithole umthamo othe xaxa kuziphehlimandla zomoya nezelanga ezikhona.
Sizophinde futhi sibeke izinhlelo ezizovumela omasipala abame kahle kwezezimali ukuthi bazikhiqizele ugesi wabo usuka kubakhiqizi bogesi abazimele.
Okuhambisana namasu ashiwo ngonyaka odlule, u-Eskom usuqalile ukuhlukanisa izinhla ezintathu zemisebenzi yakhe - ukukhiqizwa, ukudluliswa kanye nokusatshalaliswa - umsebenzi ngamunye uzoba nebhodi kanye nezinhlaka zawo zokuphatha.
Esisebenzisana nabo emphakathini abahlelwa ngaphansi koMkhandlu weZwe Wokuthuthukisa Ezomnotho Nezabasebenzi (Nedlac) babe nemihlangano lapho bebedingida iziphakamiso eziningana emavikini amabili adlule ukuvuma izimiso zesivumelwano somphakathi ngogesi.
Lokhu kungukuthuthuka okuqophe umlando futhi okuqalayo njengoba kubonisa ukuzibophezela kwabobonke esisebenzisana nabo emphakathini ukuthatha izinyathelo ezidingekayo nokunikelela ngokufanele ukubhekana nezidingo zethu zogesi.
Ngalesi sivumelwano okusetshenziswana nabo emphakathini bafuna u-Eskom osebenza kahle, onemiphumela kanye nolungele ukusebenza okhiqizela imiphakathi nezimboni ugesi ngamanani angabizi.
Lokhu kudinga ukuncishiswa okukhulu ezindlekweni - kubandakanya nokubuyekezwa kwezivumelwano zokusebenza ezingalandeli umthetho - nezindlela zokuhlanganisa izinsiza ezizonciphisa isikweletu sika-Eskom bese zifaka imali lapho kudingeka khona.
Okusetshenziswana nabo emphakathini - izinyonyana zabasebenzi, amabhizinisi, izinhlangano ezibhekele inhlalo yomphakathi kanye nohulumeni - bazinikele ukuthola uxhaso lwezimali ukubhekana nosizi lwezimali lwaka-Eskom oluzoyiqhuba isikhathi eside ngokwezimali.
Bazofuna ukukwenza lokhu ngendlela engabeki impesheni yabasebenzi engcupheni futhi engathunazi ubuqotho bohlelo lwezezimali.
Ngesikhathi besebenza ukuqedela lesi sivumelwano, iqiniso ukuthi uhlelo lwethu logesi luzobe lulokhu lukhungathekile koze kuqale ukusebenza kokukhiqizwa kogesi okusha.
Ngalezindlela ezisheshayo nomsebenzi oqhubekayo wokuhlela kabusha isisekelo semboni yethu kagesi, sizozuza ukuthunyelelwa kogesi okuthembekile, ongabizi futhi, ekugcineni, ozosiqhuba isikhathi eside.
Sithatha lolu guquko olunezinqumo ngomgudu wogesi wethu ngesikhathi lapho abantu bebhekene nokusatshiswa okukhulu osake kwaba khona okungesimo sokuguquguquka kwesimo sezulu.
Izolo ngihlangane no-Ayakha Melithafa, isishoshovu sesimo sezulu esisesincane sase-Eerste Rivier esasihambele Isigungu Esengamele Ukuthuthukiswa Komnotho Emhlabeni e-Davos kulo nyaka ukucela abaholi bomhlaba ukuthi babumele baqine ubulungiswa besimo sezulu.
U-Ayakha ungicele ukuba ngiqinisekise ukuthi ayikho ingane yase-Afrika eshiyeka ngemuva oguqukweni oluya emphakathini onciphise ikhabhoni, obekezelela isimo sezulu kanye nozinzile; futhi isithembiso engizimisele ukusigcina.
Ikhomishana kaMongameli Kwezokuguquka Kwesimo Sezulu izoqinisekisa ukuthi njengoba siya phambili endleleni yekhabhoni ephansi asishiyi muntu emuva.
Sizoqedela uMthethosivivinywa Wokuguquguquka Kwesimo Sezulu, onikeza uhlaka lwezimiso zokuphathwa ngendlela kwemithelela yokuguquka kwesimo sezulu okungenakugwenywa ngokuthuthukisa ukumelana nokuguquka kwesimo sezulu, kuqiniswe ukuzilungiselela nokulindela ukuguquka kwesimo sezulu kanye nokunciphisa ukuba buthakathaka ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu - nokuthola amathuba ezimboni amasha emnothweni onciphisa ubungozi kwezemvelo.
Sidinga ukulungisa izimali zomphakathi wethu.
Amazinga aphansi okukhula achaza ukuthi asenzi imali engenayo eyanele ukuhlangabezana nezindleko zethu, isikweledu sethu sibheke emazingeni lapho singeke sisakhona, nokuchitha imali lapho kungafanele khona ekuqedeni nasekukhokheni isikweletu kanye nenzalo kunezingqalasizinda nemisebenzi ekhiqizayo.
Angeke sikwazi ukuqhubeka ngale ndlela. Futhi ngeke sikwazi ukuma phuhle.
Uma ethula inkulumo yakhe yeSabelomali emavikini amabili ukusuka manje, uNgqongqoshe Wezezimali uzonikeza uhlaka lochunge lwezinhlelo zokunciphisa nokwenza ngcono ukwakheka kwalo.
Sizibandakanye nabasebenzi kanye nabanye ababamba iqhaza ezinhlelweni esizidingayo ukugcina umthethosivivinywa wamaholo abasebenzi bakahulumeni nokunciphisa ukumosha.
Imizamo yokunciphisa ukuchithwa kwemali kukahulumeni, ukubeka phambili izinsiza ngendlela esebenza kahle, nokwenza ngcono ukusebenza kahle kohlelo lwentela kubalulekile - kodwa akwenele - ukunikelela ukuletha uzinzo kwezezimali zikahulumeni.
Ukuzuza uzinzo ekugcineni kuzodinga ukuthi sibhekana nezinselelo zokwakheka komnotho ezikhuphula izindleko zempilo nokwenza ibhizinisi.
Ngokusebenza noMcwaningimabhuku Omkhulu ukunciphisa izindleko ezingekho emthethweni, ngokugudluka ekusebenziseni imali kukahulumeni ezindlekweni iyotshalwa kwingqalasizinda, sihlose ukwenza ngcono isimo sezimali zikahulumeni wethu.
UMgcinimafa Kazwelonke neBhangengodla laseNingimu Afrika basebenza ndawonye ukukhulula ingcindezi kumabhizinisi nakubathengi.
Sinqume ukusungula isikhwama somcebo esizimele njengemizamo yokugcina nokukhulisa isizwe sethu ngoxhaso-mali lwezwe, ukwenza ngempela umyalelo wokuthi abantu kumele babelwe kumcebo wezwe.
Siyaqhubeka futhi nokusungulwa kwebhange lombuso njengengxenye yomzamo wethu ukwandisa ukufinyelela kwabo bonke abantu baseNingizimu Afrika ezinsizakalweni zezimali.
UNgqongqoshe Wezezimali uzonikeza imininingwane ngalokhu enkulumweni yakhe Yesabelomali.
Sizobe sithatha izindlela ezifinyelela ekudeni zokuguqula isimo somnotho ngokuthi sizofaka lezo eziqukethwe kushicilelo olwadidiyelwa nguMgcinimafa Kazwelonke, olusihloko sithi ‘Economic Transformation, Inclusive Growth and Competitiveness’ ‘Ukuguquka Komnotho, Ukukhula okulinganayo ngokomnotho kanye Nokuncintisana’
Kulo nyaka, siyasuka kuzinzo lwamabhizini aphethwe nguhulumeni siya ekunikezeni lezi zinkampani zamasu enye inhloso yokweseka ukukhula nokuthuthuka.
Emva kweminyaka yokubanjwa kombuso ngobhongwane, inkohlakalo kanje nokuphatha budedengu, sisebenza ukuqinisekisa ukuthi wonke amabhizinisi aphethwe uhulumeni (SOEs) ayakwazi ukufezekisa umyalo wabo wokuthuthukisa nokuba nozinzo kwezezimali.
Ekuxoxisaneni noMkhandlu KaMongameli Wamabhizinisi Aphethwe Uhulumeni, sizoqala umsebenzi wokuhlela kabusha amabhizinisi ethu aphethwe uhulumeni futhi siqinisekise ukuthi asebenzela izinhloso zamasu omnotho noma okuthuthukisa.
Umonakalo wokubanjwa Kombuso Ngobhongwane, inkohlakalo kanye nokuphatha budedengu kuma-SOE kubonakala kahle kakhulu enkampanini yamabhanoyi i-South African Airways, eyabekwa ekutakulweni kwamabhizinisi ekupheleni konyaka odlule.
Abasebenza ukutakula amabhizinisi balindeleke ukuveza obala amaqhinga abo okuhlela kabusha inkampani yezokundiza emavikini ambalwa azayo.
Ekukhathaleleni imboni yezokundiza yaseNingizimu Afrika kanye nomnotho wethu, kubalulekile ukuthi inkampani yezokundiza esihlelwe kabusha ngengomuso izoba nozinzo ngokwentengiso nangokusebenza futhi ayincikile ekuqhubekeni ukuthi ixhaswe nguhulumeni.
Okuseqhulwini kulo nyaka ukulungisa ojantshi bokuhamba izitimela, okuyinto ebalulekile emnothweni kanye nempilo yekhethelo yabantu bethu.
Ojantshi bethu nsukuzonke bahambisa amakhulu ezigidi zabagibeli ukuya nokubuya emsebenzini.
Senza ukusebenza kwezitimela zakwa-PRASA kube okwesimanjemanje.
Umzila ophakathi eNtshonalanga Kapa kanye nomzila waseMabopane ePitoli ivaliwe ngenxa yokulungiswa kabusha nokuthuthukiswa.
Sitshala imali eyisigidigidi esingu-1.4 samarandi kulowo nalowo mzila ukunikeza ukusizakala okuphephile, okuthembekile nokungabizi.
Umsebenzi oqhubekayo kweminye imizila kufaka ukuthuthukiswa kweziteshi, ukubuyisela kabusha izindawo zokupaka, ukufaka izimpawu ezintsha kanye nokuthuthukiswa kokudonswa kukagesi phezulu.
Njengoba sisebenza ukulungisa amakhono okusebenza kombuso, siyazi ukuthi ukukhula kanye nokwenza imisebenzi ngokwesilinganiso esikhulu kuzoqhutshwa amabhizinisi azimele.
Ngakho-ke sakha indawo yokusebenza evuna ukwenza ibhizinisi.
Ngokusebenza ngokubambisana nezinhlaka zomphakathi, siqhubekile nokubhekana nezingqinamba eziningana esezibe izithiyo ekwenzeni imisebenzi.
Ezinye zalezi zingqinamba yizimvume zokusebenzisa amanzi, abalulekile ekusebenzeni emapulazini, ezimbonini nasezimayini, ngokwedlule osekuthathe isikhathi eside ngokungafanele ukuthi zicutshungulwe, ngesinye isikhathi kufika eminyakeni emithathu kuya kwemihlanu.
Sesingasho ukuthi izimvume zokusebenzisa amanzi manje sezizokhishwa ezinsukwini ezingama-90.
Kwakuthatha izinyanga ukubhalisa inkampani.
Ngohlelo lwe-Bizportal umuntu usezokwazi manje ukubhalisa inkampani ngosuku olulodwa, abhalisele isiKhwama Somshwalense Wabalahlekelwe Umsebenzi (UIF) noMnyango Wokuqoqa Kwentela eNingizimu Afrika (SARS) kanye nokuvula i-akhawunti yasebhange.
Amachweba ethu aminyene futhi awasebenzi ngokufanelekile.
Phakathi nalo nyaka, sizoqala ukulungisa kabusha ichweba laseThekwini – indawo yesithathu enkulukazi yokungeniswa kwezimpahla kwelaseNingizimu – ukunciphisa ukubambezeleka nezindleko.
Uxhaso olubalulekile esingalwenza ekukhuleni komnotho okubandakanya umutnu wonke lusekuthuthukiseni kwamakhono afanele.
Ukutshalwa kwezimali esikwenza manje Ukuthuthukisa Ukukhuliswa Kwabantwana nokufunda usasemncane kuzoholela emiphumelweni emihle yezomnotho eminyakeni engama-20 ezayo – nangale.
Kodwa kukhona ukungenelela kwamanje esikwenzayo ukwenza ngcono ubukhethelo nokufaneleka kwemiphumela yezemfundo yethu.
Senza inqubekela phambili ngokwethulwa kohlelo lwezinhla ezintathu lwezemfundo, nokwethula ukugudluka okubalulekile kubhekwe kakhulu ukufundisa amakhono nezobuchwepheshe.
Izifundo ezehlukene zamakhono nobuchwepheshe sezazisiwe ezikoleni ezingama-500 nezikole ezingama-67 njengamanje ziqalile ukusebenza ngaloluhlelo ngenhloso yokubonisa ukuthi ngabe luzosebenza na.
Sakha amakolishi amakhono nobuchwepheshe ayi-9 kulonyaka, e-Sterkspruit, e-Aliwal North, e-Graaff Reinet naseNgqungqushe eMpumalanga Kapa, kanye nase-Umzikhulu, e-Greytown, eMsinga, kwaNongoma nakwaGqikazi KwaZulu-Natali.
Ngezivumelwano ezinxa-mbili zemifundaze yabafundi, esizisayine namanye amazwe, sakha iqembu elikhulu labantu abasha abazoya phesheya kwezilwandle njalo ngonyaka ukuyoqeqeshelwa amakhono abucayi.
Siwubonile umthelela lokhu ongaba nawo ohlelweni lokuqeqeshelwa ezokulapha i-Nelson Mandela Castro Medical Programme e-Cuba, esikhiqize odokotela abelaphayo abangaphezu kwe-1200 kanye nabafundi abangama-640 abalindeleke ukuthwala iziqu ngoZibandlela kunyaka wezi-2020.
Lolu hlelo luyisikhumbuzo esibonakalyo kulezi zingqalabutho ezimbili.
Ngonyaka odlule ngakhuluma ngohlelo lwethu lokunikezela ngamakhompyutha angamathebhulethi kubafundi besikole.
Umsebenzi wokuhambisa lamathebhlethi luyaqhubeka.
Sathi wonke umntwana oneminyaka eyi-10 kumele akwazi ukufunda ngokuqondisisa.
Izinhlelo zethu zokufunda usemncane zithola umfutho.
Kulo nyaka, sizokwethula izifundo ezifundwa ngobuchwepheshe bamakhompyutha i-coding ne-robotics emabangeni R kuya ebangeni lesithathu ezikoleni ezingama-200, ngohlelo lokuliqalisa ngokuphelele ngonyaka wezi-2022.
Sesinqume ukusungula Isikhungo Semfundo Ephakeme Yezesayensi Nezindlela ezintsha zokwenza izinto (University of Science and Innovation) e-Ekurhuleni.
I-Ekurhuleni ilona kuphela idolobha ezweni lethu elinganaso isikhungo semfundo ephakeme.
Lokhu kuzovumela abantu abasha kulelo dolobha ukuqeqeshwelwa izimboni ezikhona nezangomuso izindlela ezintsha zobuchwepheshe banamuhla nobunomthelela ophezulu kakhulu.
Utshalomali nokukhula kudinga indawo ephephile, enozinzo kanye nengenabugebengu.
Okubaluleke kakhulu, kuyisisekelo sezifiso zabantu bethu bonke ukuphila ngokuphepha, ngokuthula nangokunethezeka.
Ukubonakala kwamaphoyisa, nokuqeqeshwa okufanele kanye nokuba khona kwezinsiza eziteshini zamaphoyisa kuseqhulwini.
Ngibeke eqhulwini ukubhekana kwethu nenkinga edlondlobalayo yamaqembu ezigebengu akhwabanisa imali yezinkontileka zokwakha namanye amabhizinisi.
Amathimba ayizipesheli - ahlanganisa Uphiko Lwamaphoyisa aseNingizimu Afrika (SAPS) kanye noPhiko Lwezokushushisa Lukazwelonke - anikwe umyalelo wokulwa nalobu bugebengu obuphazamisa umnotho.
Ukweseka ukukhula kwemboni yezokuvakasha, amaphoyisa azobonakala kakhulu ezindaweni ezikhethiwe zokuheha izivakashi.
Ukuqeqesha Abaqaphi Bezokuphepha kwezokuvakasha nokusungula izikhundla zamavolontiya amaphoyisa azobhekana nokuqapha izindawo eziheha izivakashi.
Ithimba elilwisana namaqembu ezigelekeqe lizophinde liqiniswe, ngokubeka eqhulwini indawo yaseNtshonalanga Kapa, iMpumalanga Kapa, i-Gauteng kanye neFreyistata.
Emva kokuthola iziqu kwamaphoyisa ayeqeqeshwa ayizi-5000 ngonyaka odlule, amaphoyisa amasha azoqeqeshwa ayizi-7000 asefakwe ohlwini ukuze siqise ezokuqapha ekhaya.
Ukwenza ngcono ubukhethelo bophenyo olujwayelekile nolukhethekile, sisungula Isikhungo semfundo ephakeme esibhekene nokutholwa kobugebengu (Crime Detection University) e-Hammanskraal.
Ezinyangeni esiyisithupha ezedlule, izwe lonke beliphoqeleke ukuma ngezinyawo - emiphakathini, uhulumeni, izinhlangano zomphakathi, izinhlangano zezenkolo, uphiko lwezobulungiswa kanye nephalamende - ukuqenda usizi lodlame olwenziwa ngamadoda kwabesifazane bezwe lethu.
Kube ukusabela okunokuzimisela nokubambana ngokweqiniso kusuka kubobonke abantu baseNingizimu Afrika.
Ngokwakha izivumelwano zomphakathi emiphakathini ukulwisa lesi sihlava sikwazi ukuzuza okuningi.
Kodwa kusengukuqala nje komzabalazo.
Saqalisa ukusebenza ngohlelo oluphuthumayo nokuphinde sibeke eqhulwini imali eyisigidigidi esi-1.4 samarandi ukweseka loluhlelo kuze kuphele unyaka wezimali esikuwo.
Sekube nenqubekela-phambili ezindaweni eziningi.
Sizochibiyela UMthetho Obhekele Udlame Lwasekhaya ukuze uvikele kangcono izisulu zodlame olusebudlelwaneni emakhaya kanye Nomthetho Wezokwephulwa Komthetho Wocansi ukuhlukanisa izigaba zabaphula umthetho wezocansi abagama abo azofakwa Ohlwini Lukazwelonke Lwabaphula Umthetho Wezocansi, futhi kuzophasiswa umthetho wokuqinisa ibheyili kanye nemigomo yokugwetshwa emacaleni abandakanya udlame olubhekiswe kwabobulili obuthile.
Angeke sihluleke ekulweni nenkohlakalo nokubanjwa kombuso ngobhongwane.
Sidinga ukusebenza ngokubambisana ukuvundulula umnyombo wenkohlakalo bese siqinisa ukusetshenziswa komthetho.
Akumele sicele noma sikhiphe intshontsho noma sizibandakanye ezenzweni zenkohlakalo.
Kumele sithuthukise isiko lethu lokubika ubugebengu uma sibubona benzeka.
Lempi izonqotshwa uma ihlaselwa nguwona wonke umphakathi, uma sakha izivumelwano ezingenzeka nazo zonke izinhlangano zomphakathi.
Ngakho-ke siyawamukela umsebenzi wokubambisana kukahulumani nezinhlangano zomphakathi begqugquzelwa ngokusungula isu likazwelonke lokulwa nenkohlakalo nohlelo lokuqala ukusebenza, osekuseduze ukuthi kuphele kulesigaba somsebenzi.
Sihlele okwethula lamasu phakathi nonyaka.
Ikhomishana KaZondo efaka Imibuzo Ngokubanjwa Kombuso Ngobhongwane iyaqhubeka nomsebenzi wayo obucayi ngokwesekwa ngokuphelele ngohulumeni nezinye izikhungo.
Ngithole umbiko ogcwele imininingwane ngeKhomishana Yophenyo lwezeNhlangano Yezokutshalwa Kwezimali Zombuso.
Ngizokwenza ukuthi itholakale emphakathini kanye necebo lokudlulisela phambili okutholakele nezincomo ezinsukwini ezimbalwa.
Njengoba silungisa izisekelo, sisaqinisa izinguquko esizenzile, siphokophelele izindawo ezibucayi zokuKhuliswa Komnotho Okubandakanya Umuntu Wonke.
Enkulumweni Yesimo Sezwe eyandulela lena, ngathi indawo ebucayi yokutshalomali eyeseka ukwakhekha koguquko, ukukhula kanye nokudala imisebenzi,
Iqembu elibhekele ukusebenza kwesiKhwama Sezingqalasizinda sesiluphothulile uhla lwemisebenzi esime ngomumo ukuqala ukusebenza futhi seliqalile ukwandisa utshalomali lwangasese luya emikhakheni yezingqalasizinda zikahulumeni ngezindlela ezehlukene zokuthola imali.
Lokhu kubandakanya izindawo ezifana nendawo yokuhlala yabafundi, izindlu zomphakathi, abakhiqizi bamanzi abazimele, ojantshi besitimela abachezukela eceleni, ukuphehlwa kukagesi ngokwezilingasizo ezincane, inqwaba yezingqalazisinda zomasipala, kanye nokuqedela uhlelo lokuthunyelwa kwemiyalezo eminingi ngasikhathi sinye.
Iqembu linomsebenzi eliwenzayo njengamanje oluzoba nomphumela wotshalomali olungaphezu kwama-700 ezigidigidi zamarandi, kubandakanya iminikelo kahulumeni naleyo okungeyona ekahulumeni.
Imishini yokuthwala izinto ezisindayo nemishini yokusebenza ephuzi ebesilangazelela ukuyibona emathafeni ezwe lethu kuzophinde futhi kube into esiyibona nsuku zonke.
Uhlelo lwezindlu zomphakathi lokwakhela imindeni ehola kancane izindlu zokuqasha sekusezingeni lokuqalwa, olungafika emandleni ayisi-9 sezigidigidi zamarandi zotshalomali lwangasese ekwakhiweni izindlu zokuqasha ezingama-37 000.
Abantu abasha abasenyuvesi nasemakolishi amakhono nobuchwepheshe babhekene nezinselele ezinkulu zendawo yokuhlala.
Abanye abanazo nezindawo zokulala uma beqeda kufunda emaklasini bese bekhetha ukuyolala emtapweni wolwazi.
Sizosebenzisa ama-64 ezigidigidi zamarandi eminyakeni ezayo ezindaweni zokuhlala zabafundi futhi sizoboleka okungenani ama-64 ezigidigidi zamarandi kutshalomali lwangasese.
Lemi sebenzi yokwakha isime ngomumo ukuqala.
Besilokhu sikhuluma ngedamu Umzimvubu eliseMpumalanga Kapa iminyaka ecishe ibe yishumi, ngokuncane kakhulu esingakukhomba.
Sizimisele ukunqoba izinselelo zezimali nokunye obekudonsela emuva inqubekela-phambili futhi kuncisha abantu bale ndawo insinza ebaluleke kangaka.
Ukwakhiwa komgwaqo kule ndawo sekuqalile, futhi maduze ngizovakashela indawo le ukuqinisekisa ukuthi siya phambili nalo msebenzi.
Sethula Isikhwama Sezokuvakasha kulo nyaka ukuvuselela uguquko kwezokuvakasha.
Ngonyaka odlule, ngacela izwe ukuthi lihlanganyele nami ekujuleni ngemicabango ngedolobha elisha elihle, idolobha elinganalo ubandlululo oluzodlondlobala ukushintsha ukwakheka komphakathi nomnotho wobandlululo.
Idolobha elisha elihle liyakheka e-Lanseria, lapho abantu abayizi-350 000 kuya kwezi-500 000 bazolibiza ikhaya eminyakeni eyishumi ezayo.
Umsebenzi uholwa Ihhovisi Lokutshalwa Kwezimali neZingqalasizinda ehhovisi likaMongameli libambisene nohulumeni bezifundazwe zase-Gauteng kanye naseNyakatho Ntshonalanga, ngokusebenzisana namadolobhakazi afana ne-, i-Tshwane kanye neMadibeng.
Sisebenzisana nezikhungo zokuthuthukiswa komnotho sesihlanganise umsebenzi omusha ozoxhasa ngokwezimali ukuthuthwa kwendle, ugesi, amanzi, izingqalasizinda zobuchwephashe kanye nemigwaqo ezoba isisekelo saleli dolobha elisha.
Angeke nje kuphela libe lihle nokulungela ubuchwepheshe besigaba sesihlanu i-5G, kodwa lizoba umaka ohamba phambili wengqalasizinda ebheke ezemvelo ezwenikazi nasemhlabeni jikelele.
Sizobe sihlola ukusebenza kwelinye ilokishi kanye nezinhlelo zemigwaqo yasemakhaya lapho imigwaqo emine okuvivinywa ngayo izoluleka ibe ngamakhilomitha angama-50 ngamunye izokwakhiwa ezindaweni ezihlukene zezwe.
Lo msebenzi uzoqinisekisa izixazululo zezindleko zoMbuso, ukudluliselwa kwamakhono afanele kanye nokuba namandla okusebenza kanzima ukudala imisebenzi kunezindlela zokwakha imigwaqo ezejwayelekile.
Sibhekane nosizi lokungasebenzi kwabantu abasha.
Kubantu abasha abangu-1.2 wesigidi abathola umsebenzi unyaka nonyaka, bacishe babe okubili kokuthathu abasala bengasebenzi, bengafundi futhi bengaqeqeshiwe.
Bangaphezu kukahhafu wabantu abasha abangasebenzi. Lolu usizi.
Sidinga ukwenza leli zwe lisebenzele abantu abasha, ukuze nabo bazosebenzela izwe lethu.
Isixazululo kulolu sizi kumele lube mbaxambili - kumele sakhele abantu abasha amathuba emisebenzi kanye nokuziqasha bona.
Ekusebenzeni kwabantu abashu, ukusuka namuhla, siqala ukusebensiza uhlelo LukaMongameli Lokungenelela Ukusebenza Kwabantu Abasha - izinto eziyisithupha eziseqhulwini eminyakeni emihlanu ezayo ukunciphisa ukungasebenzi kwabantu abasha.
Okokuqala, sivulela abantu abasha imigudu eya emnothweni.
Sakha izixazululo ezingujuqu ukufinyelela kubantu abasha lapho bekhona - ezinkundleni zokuxhumana, efonini kanye nangeziqu zabo.
Lokhu kuzobavumela ukuthola ukwesekwa, ulwazi kanye nokuqeqeshelwa ukulungela umsebenzi ukukhuphula ukuqasheka kwabo nokuzifaka emathubeni.
Ukusuka kule nyanga, sethula izindawo ezihlanu zokuthumela imiyalezo ezifundazweni ezinhlanu ezizokhulisa inethiwekhi yezwe ukufinyelela ezigidini ezintathu zabantu abasha ngemigubu eyahlukene.
Lokhu kuzobavumela ukuthola ukwesekwa, ulwazi kanye nokuqeqeshelwa ukulungela umsebenzi ukuphuphula ukuqasheka kwabo nokuzifaka emathubeni.
Okwesibili, siguqula indlela esilungiselela ngayo abantu abasha ingomuso lomsebenzi, sibahlinzeka ngezinhlelo zezifundo ezimfisha, nezihambelana nezimo emakhonweni athize adingwa ngabaqashi emikhakheni ekhulayo ngesivinini.
Okwesithathu, sithuthukisa izindlela ezintsha ukweseka ukuvulwa kwamabhizinisi nokuziqaska kwabantu abasha.
Okwesine, sikhuphula izinga Lokusiza Abantu Abasha Ngemisebenzi nokusebensisana namakolishi amakhono nobuchwepheshe kanye nomkhakha wangasese ukuqinisekisa ukuthi baningi abafundi abathola ukuqeqeshwa ngokuba sendaweni yomsebenzi ukuphothula ukuqeqeshwa kwabo.
Okwesihlanu, sisungula iqembu lokuqala lohlelo lukaMongameli Losizo Lwentsha oluzovula ukungenelela kwabantu abasha futhi lubanikeze amathuba ukuze nabo bathole inzuzo ngesikhathi benikela ekwakheni isizwe.
Okokugcina, sizohola igxathu lokuqashwa kwabantu abasha oluzoxhaswa ngokubeka eceleni isamba esiyi-1% lesabelomali ukuze sisetshenziswe ukubhekana namazinga aphezulu okungasebenzi kwabantu abasha.
Lokhu kuzokwenzeka ngokugebhula kusabelomali, okuzodinga ukuthi sonke sizibambe ziqine bese sibhekisa kabusha izinsiza ukuhlangabezana nosizi lukazwelonke lokungasebenzi kwentsha.
UNgqongqoshe Wezezimali uzobeka eqhulwini lomsebenzi aphinde anikeze imininingwane eqonde ngqo uma esethula Isitatimende Somthetho Wesabelomali Saphakathi nonyaka ngasekupheleni kwalo nyaka.
Lezi zenzo zizonke zizoqinisekisa ukuthi wonke umuntu omusha kuleli zwe onendawo angaya kuyo, ukuthi amandla namakhono abo ayasetshenziswa, nokuthi bangakwazi ukulekelela ukufaka isandla ekukhuliseni imiphakathi yabo kanye nezwe labo.
Njengengxenye yokungenelela, iNhlangano kaZwelonke eThuthukisa Intsha kanye noMnyango Wokuthuthukiswa Kwamabhizinsi Amancane uzonikezela ngoxhasomali kanye nokulekelwa kwamabhizinisi kosomabhizinisi abancane abayi-1000 ezinsukwini eziyi-100 ezilandelayo- kusuka kusasa.
Simeme abathathu balabo somabhizinisi abancane ukuthi bahlanganyele nathi kusihlwa: uSiyabonga Tiwana, uSibusiso Mahone kanye noTholakele Nkosi.
Bona kanye nabanye abafana nabo batshengisa ukuthi, uma benganikwa ukwesekwa okudingekayo, abantu abasha bangazidalela amathuba ngokwabo.
Labo somabhizinisi abathathu abancane bayingxenye yohlelo olukhulu olunezifiso zokusiza osomabhizinisi abancane bayi-100 000 eminyakeni emithathu ezayo ukuthola ukuqeqeshwa ngamakhono amabhizinisi, uxhasomali kanye nokubheka ezentengiso.
Ukuthuthukiswa kwabesifazane kubucayi ekukhukisweni komnotho obandakayo wonke umuntu.
Sethula indlela yokusebenza ebizwa nge-SheTradesZA ukusiza amabhizinisi aphethwe ngabesifazane ukuthi lungene ezitolo eziluxhaxha emhlabeni jikelele kanye nasezimakethe.
Eminyakeni emihlanu ezayo, Inhlangano Yokuthuthukiswa Kwezimboni izibekele izigidigidi eziyi-10 zamarandi zoxhasomali lwayo kanye nolalaba esebenzisana nabo zamabhizinisi aphethwe abesifazane.
Ukuvulela amabhizinisi amancane imakethe enkulu, sihlela ukuqoka imikhiqizo ekhiqizwa lapha ekhaya okumele ithengwe kumabhizinisi amancane (SMMEs).
UMthethosivivinywa Wokuthenga uzokwethulwa ePhalamende maduze njengengxenye yemizamo yethu yokuthuthukisa amabhizinsi abansundu nasafufusa nokuguquka okukhulu kwezomnotho.
Kulonyaka siqinisa umkhankaso wethu wotshalomali ngokusungula ukukhangiswa kotshalomali oluhlanganisiwe nokubheka ukuqhutshwa kwaloluhlelo oluxhunyaniswe ihhovisi likaMongameli.
Sizobamba iNgqungquthela Yotshalomali eNingizimu Afrika ngoLwezi ukubuyekeza ukuqala kokusetshenzwa kwezibophezelo ezedlule nokuza notshalomali olusha emnothweni wethu.
Engqungqutheleni Yotshalomali LwaseNingizimu Afrika yesibili ngonyaka odlule, zingaphezu kwama-70 izinkampani ezazibophezela kutshalomali lwezigidigidi eningama-364 zamaradi ezimbonini olwehluke njengokukhiqiza okusezingeni eliphezulu, ezolimo, izingqalasizinda, ezezimayini, izinsizakalo, ezokuvakasha nokuphathwa kwezivakashi.
Eminyakeni emibili yokuqala womkhankaso wethu wotshalomali, sesiqoqe isamba sezigidigidi ezingama-664 zamarandi ezibophezelweni zotshalomali, okungaphezu kohhafu kwesizibekele khona eminyakeni emihlanu okuyitriliyoni eli-1.2 lamarandi.
Okubaluleke kakhulu, lolu tshalomali lunomthelela wangempela.
Njengamanje, imisebenzi yesamba sotshalomali sezigidigidi eziyi-9 zamarandi isiphothuliwe nemisebenzi engama-27 ebiza ngaphezu kwezigidigidi ezingama-250 zamarandi izoqalwa, neminye eminingi ezayo kulonyaka.
Ngivakashele izimboni ezisanda kwakhiwa ezenza omakhalekhukhwini, kanye nezindawo zokukhiqiza ezinwebiwe ukukhiqiza izimoto ezithe xaxa, ngihambe othulwini ezindaweni lapho kusetshenzwa khona kubaphakeli bemikhiqizo.
Sesihambele imicimbi yokuvulwa kwezindawo ezikhiqiza izimpahla kusuka ezintanjeni zikagesi kuya emikhiqizweni yenhlanzeko, kusuka emathayini kuya ekudleni.
Sesenze inqubekela phambili ebalulekile ekuphothuleni nokuqalisa ukusebenza kwamasu ezingxenyeni ezibalulekile zomnotho wethu.
Lamasu amakhulu aletha uhulumeni, abasebenzi namabhizinisi ndawonye ukuthuthukisa izindlela zokukhula ezingeni labo futhi ngabanye ngabanye bafaka isandla ekwenzeni ukuthi kusebenzeke.
Siyabonga kakhulu Ohlelweni lwe-Auto Master Plan, sidayise izimoto eziningi emhlabeni ngonyaka odlule ukudlula ngaphambilini, okunikeze imisebenzi kubantu abasha eMpumalanga Koloni naKwaZulu Natali.
Sethule indawo entsha ye-SEZ e-Tshwane, ezokwandisa ukukhiqizwa nokwenziwa kwemikhiqizo yalapha ekhaya.
Uhlelo Lwemboni Yezingubo nendwangu, olwasayindwa ngonyaka odlule, luhlose ukudala imisebenzi emisha eyi-121 000 embonini yezendwangu kanye nasemkhakheni wezicathulo eminyakeni elishumi.
Kubandakanya ukuzibophezela kwabadayisi ukuthenga izimpahla zalapha ekhaya, ngabakhiqizi ukutshala izimali nokweseka uguquko, nabasebenzi ukusungula uhlaka lokuxoxisana oluzothuthukisa ukukhiqizwa ngokushesha.
Ukudlala indima yakhe, uHulumeni useqalile ukuthatha izinyathelo ukulwisana nokulethwa kwempahla ebuya ngaphandle ngokungemthetho, ushaqe amagogogo angama-400 anezimpahla ezidayiswa ngamanani ehlisiwe ngekota yokugcina onyakeni wezi-2019.
Isudu engiyigqokile namuhla (Kumele ngihlambuluke ukuthi isudu entsha sha), njengasonyakeni odlule, yenziwe ngabasebenzi baseNingizimu Afrika.
Ngithanda ukugqugquzela ukuthi sonke sithenge imikhiqizo yalapha eNingizimu Afrika.
Siphothule Uhlelo Lwezinkukhu ukusekela abalimi bezinkukhu kanye nabakhiqizi songa imisebenzi engama-54 000 ngesikhathi sidala imisebenzi emisha.
Imboni manje isigxile ekukhuleni, ukukhulisa ukukhiqiza kanye notshalomali oluthe xaxa.
Emavikini amabili sizonquma intela entsha yezinkukhu eziqhamuka ngaphandle ukuze sizokweseka izimboni zalapha ekhaya.
Sesiqhamuke nohlelo nabalimi kanye nabezimboni ukonga imisebenzi embonini kashukela futhi kuzoqedelelwa Uhlelo Olubhekele Ushukela emavikini ayisithupha azayo; silindele uHlelo olusha Lwensimbi ukuthi luqedelwe ezinyangeni eziyisithupha ezizayo.
Kusuka namuhla, imithetho emisha eshicilelwe Kusomqulu Kahulumeni uzovumela ukuphenywa nokuthathela izinyathelo laba abahlukumeza amandla abathengi kanye nokubandlulula ngokwamanani.
Lokhu kuzosiza endimeni yamabhizinisi amancane kanye nosomabhizinisi abasavela.
Imibuzo ngezezimakethe nosizo ngemininingwane, izitolo zokudla kanye nezokunakekela kwempilo zinikeze izindlela zokunciphisa izindleko kubathengi nokwenza lemikhakha ukuthi incintisane.
Abaphathi bomncintiswano basebenza ukuza nesisombululo nabalawuli bomakhalekhukhwini ukuthola indlela yokwehlisa amanani edatha kulabo abathenga inqwaba yedatha nyanga zonke, okunye ukwehliswa kwamanani okubhekiswe emakhaya ahola imali encane, nokuthola idatha yamahhala nokungena mahhala kumawebhusaythi ezemfundo nalwawo athintene nohulumeni.
Leli igxathu elibalulekile ukwenza ngcono izimpilo, ukuletha abantu emnothweni wobuchwepheshe kanye nokuqala amabhizinisi asebenza ngobuchwepheshe bamakhompyutha.
Umnotho wobuchwepheshe uzophenduka umlawuli wokukhula nokudala isisebenzi.
Ikhomishana kaMongameli ngoGuquko Lwezimboni Lwesine selwenze izincomo ezifinyelela kude ezizoba nomthelela cishe kuwowonke amacala omnotho nasezindaweni eziningi zempilo yethu.
Umbiko weKhomishana usinikeza amathuluzi okuqinisekisa ukuthi sithola ukuzua okukhulu ngalezinguquko zobuchwepheshe.
Isimo esibalulekile sempumelelo somnotho wobuchwepheshe ukuba khona kwamagagasi omoya ukwazi ukwandisa ukuthumela kwemiyalezo eminingi ngesikhathi esisodwa nokuthembeka.
UMlawuli, ICASA, usenqume ukuphothula imvume yokudingeka kwamagagasi omoya kwezimboni ngohlelo lwendlai ekupheleni konyaka wezi-2020.
Ngenxa yezimfuneko ezengeziwe, ukunikwa kwemvume Yokusebenzisa Amagagasi omoya i-Wireless Open Access Network (i-WOAN) - kubukeka kuzophela phakathi nonyaka ozayo.
Ezolimo zingenye yezimboni ezinamandla amakhulu okukhula.
Kulonyaka, sizoqala ngezincomo ezibalulekile zeThimba Lezeluleko LikaMongameli mayelana nokuBuyiswa Komhlaba Nezolimo ukuqhuba ngesivinini uhlelo lokubuyiselwa komhlaba, ukukhulisa ukukhiqizwa kwezolimo kanye nokuguqula imboni.
Uhulumeni ume ngomumo - kulandela ukuphothulwa umsebenzi wePhalamende ukuchibiyela isahluko sama-25 soMthethosisekelo - ukubheka UMthethosivivinywa WokuThathwa Komhlaba ozobeka ngokucacile izimo zokuthi ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo kuvumeleke kanjani.
Kuze kube manje, sesikhulule amahektha omhlaba kahulumeni ukuze unikezwe kulabo bezicelo zokubuyiselwa umhlaba, futhi kulonyaka sizokhulula amahektha angama-700 000 omhlaba kahulumeni ukuze kukhiqizwe ezolimo, ngokuholwa iPhini LikaMongameli.
Sibeka eqhulwini intsha, abesifazane, abantu abaphila ngokukhubazeka kanye nalabo akade belima endaweni yomphakathi futhi asebekulungele ukukhulisa ukusebenza kwabo uqeqeshwa kanye nokwabelwa umhlaba.
Inqubomgomo yokukhethwa abazozuza ibandakanya ukuqeqeshwa okuyimpoqo kwalabo abangaba abazuzi ngaphambi kokuthu babelwe umhlaba.
Ngenxa yesomiso ezingxenyeni eziningi zezwe, abalimi balahlekelwe izitshalo kanye nemfuyo futhi abasebenzi abaningi balahlekelwe imisebenzi nendlela yokuphila.
Ukusebenza Nomkhandlu Wezocwaningo Lwezolimo kanye nezinhlaka zezesayensi nezolimo, sesisungule amasu okunciphisa isomiso azogxila ekusunguleni izimbewu ezimelana nesomiso, izitshalo kanye nezinqolobane, nokususwa kokhula namasu okubheka ukuvimbela ukuphela kokuvunda kwenhlabathi.
Kulonyaka sizovula futhi silawule ukusetshenziswa nokuthengwa kwemikhiqizo eyenziwe ngensangu, okuzovulela abalimi abancane amathuba; sizokwenza inqubomgomo yokusetshenziswa kwemikhiqizo yensangu ukwelapha, sizokwakha lemboni ihambisane nokwenzeka emhlabeni jikelele.
Amagxathu okulawula azomenyezelwa ngoNgqongqoshe abathintekayo maduze.
Isimo esiyisisekelo sokukhula nentuthuko ukuba nenani labantu abanempilo nabalusizo, ngokuthola ukunakekelwa kwezempilo okulikhethelo nokungabizi.
Siwobonile umdlandla wokwesekwa ngabantu baseNingizimu Afrika ngesikhathi sokulalelwa kwemibono yomphakathi ngoMshwalense Wezempilo KaZwelonke (NHI), futhi sibeka ngononina izindlela zokuwuqalisa kulandela ukuphothulwa kokusebenza kwePhalamende.
Ukulungiselela i-NHI, sesibhalise abantu abangaphezu kwama-44 ezigidi emitholampilo engaphezu kwezi-3 000 ngohlelo lwekhompyutha Lokubhalisa Iziguli, manje sesiqalile ukusebenzisa loluhlelo ezibhedlela.
Ngisungule Iqembu Elisebenzisana NoMongameli Kwezokukhubazeka ukuze leluleke ihhovisi lami ngezindlela ezingenziwa ukuthuthukisa abantu abaphila nokukhubazeka ngokwezinhlelo zikahulumeni, utshalomali kanye nokuqala ngezinhlelo zalo.
Kulandela ukuvuma koMnyango Wezemfundo Eyisisekelo ngonyaka wezi-2018 ukuthi uLwimi Lwezandla (i-South African Sign Language) lube ulwimi lwasekhaya nezincomo ezenziwa IKomidi LasePhalamende Elibuyekeza Umthethosisekelo ukuthi kumele lube ulwini olusemthethweni lwe-12, manje sesilindele ukuliphothula loludaba.
Ekuqaleni kwaleliviki, bengibuya e-Addis Ababa eEthiopia, lapho iNingizimu Afrika iqale umsebenzi wokuba usihlalo Wezizwe Zase-Afrika ngonyaka wezi-2020.
Sithatha lesibophezelo ngesikhathi esibalulekile sezwekazi lethu.
Kulonyaka, Ukuhwebelana Ngokukhululeka eZwenikazi lase-Afrika (ACFTA) kuzoqala.
Lesi isikhathi sethu, njangabantu bezwekazi, ukufeza amaphupho ezingqalabutho zobumbano lwase-Afrika.
INingizimu Afrika izosingatha Ingqungquthela Yenhlangano Yobumbano Yamazwe Ase-Afrika ngoNhlaba kulonyaka ukuphothula izindlela Zesivumelwano Sokuhweba Okukhululekile ngaphambi kokuthi siqale sisetshenziswe mhla zi-1 kuNtulikazi ngonyaka we-2020.
Lapha sizophothula imithetho ezochaza ukuthi uyini umkhiqizo 'Owenziwe e-Afrika', intela ezokwehliswa iye kokungekho eminyakeni emihlanu ezayo, kanye nemikhakha yezinsiza ezovulwa kulolonke izwekazi.
Ngivumeleni ngithathe leli thuba ukuhalalisela umlingani wethu, uMnu Wamkele Meme, ngempelasonto eyedlule owakhethwa njengoNobhala-Jikelele we-ACFTA, simuqinisekisa ukwesekwa ngokugcwele njengoba ezoqala lomsebenzi oqophe umlando nonenselelo.
INingizimu Afrika isibeke eqhulwini ukuthuthukiswa ngokwezomnotho kwabesifazane base-Afrika ngesikhathi sayo sokuba ngusihlalo we-AU, ukusebenzisana namalungu ombuso ngezindlela zokuthuthukisa ezezimali ezibandakanya wonke umuntu, izinhlelo zokuthenga ngokukhetha nokuhweba ngokukhetha kwabantu besifazane.
Izinhloko Zombuso Zenhlangano Yobumbano Lwamazwe Ase-Afrika sifunge ukweseka kwabo izindlela zokuqeda udlame olubhekiswe kwabobulili obuthile ezwenikazi, futhi bazosebenzela ekwamukeleni Umhlangano Ngodlame olubhekiswe Kwabesifazane we-AU phakathi nalonyaka.
Ngokusebenzisa INhlangano Yokubuyekeza Yamazwe ase-Afrika, iNingizimu Afrika izosebenzisana namanye amazwe ukuqhubela phambili ukubusa nentando yeningi labantu.
Sizosebenzisa zonke izindlela esinazo - kubandakanya ubulungu bethu boMkhandlu Wezokuphepha we-UN - ukukhuthaza ukuthula nokuphepha ezwenikazi lethu.
Konke esikwenzayo kumele kwesekelwe ukuqaliswa komsebenzi ngendlela.
Yingakho sisungule Uhlelo Lokuthuthukiswa Kwesifunda (DDM), indlela ehlukile yokuhlanganisa umphakathi ebandakanya abantu abadlala indima ebalulekile kuzozonke izifunda ukuze sivulele ukuthuthukiswa kwamathuba ezomnotho.
Lokhu kwakha amandla ombuso lapho abesephele khona.
Ngesikhathi Se-SoNA ngoNhlolanja ngowezi-2019 ngakhuluma ngemisebenzi emihlanu ephuthumayo, owawubalulekile kuyona kwakungukuqinisa umthamo wombuso ukubhekana nezidingo zabantu.
Ububanzi bomsebenzi obucayi benzeka kuhulumeni wonke ukuqinisa umthamo wohulumeni basekhaya, njengengxenye kahulumeni esondelene kakhulu nabantu, ukuzuza umyalelo wokuthuthukisa nokuthola izindlela zokuhlangabezana nezidingo zomphakathi zabahlali, ezomnotho kanye nezokusetshenziswayo nokukhuphula ubukhethelo bezimpilo zabo.
Uhulumeni wesifundazwe nokazwelonke uzophindaphinda imizamo yabo ukweseka nokuqinisa umthamo womasipala njengoba kudingeka ngokweSahluko se-154 soMthethosisekelo futhi baxhase ekuqapheni nokwesekwa komasipala.
Kuphela uma sekwehluleke ukwesekwa okuhleliwe uphiko lweziphathimandla esifundazweni nakuzwelonke selungehlela kuSahluko se-139 ukungenelela ekuqinisweni kohulumeni basekhaya.
Njengamanje kunomasipala abangama-40 ezweni okumenle bathole lolu ngenelelo.
Izinyathelo ezizothathwa zizohambisana nezinhlosonqangi zohlelo lokuthuthukiswa lwezifunda, ulubheke ukuthatha indlela eyinhlanganisela ukuletha izidingo.
Abahlali bakuMasipala iMamusa eNyakatho Ntshonalanga sebelubonile lolu hlelo, lapho i-DDM yasetshenziswa ukuqeda izindawo ezingekho emthethweni zokulahla udoti, ukulungiswa kwezitamukoko zendle ukuvimbela indle ingachithekeli emigwaqeni, ukwakha imigwaqo nokufakwa kwamapayipi amanzi, nokuthunyelwa kanzi nezindlu zangasese ezikoleni zendawo.
Kulonyaka, sihlele ukunweba uhlelo lwe-DDM luye ezifundeni ezingama-23, sithatha isifundo kulezifunda ezintathu ebesibona ngazo ukuthi loluhlelo luyasebenza yini i-OR Tambo District Municipality, i-Ethekwini Municipality kanye ne-Waterberg District Municipality.
Ukuqinisa umthamo wombuso nokuziphendulela, ngizobe ngisayina izivumelwano noNgqongqoshe zokuthi bawenza kanjani umsebenzi ngaphambi kokuphela kwale nyanga.
Lezi zivumelwano - ezisuselwe kuzinhlosonqangi eziqukethwe Uhlaka Lwamaqhinga lwesikhathi Esimaphakathi (i-MTSF) - zizovezwa emphakathini ukuze abantu baseNingizimu bazofuna izimpendulo kulabo ababakhetha ukuthi baphathe.
Lezi zivumelwano zokwenziwa komsebenzi sizibona njengensika esithembele kuyo yosiko olusha lokuveza obala kanye nokuziphendulela, lapho bonke abanikezwe isibopho sokusebenzela umphakathi - kungaba njengokhethiwe ukusebenza ehhovisi noma osebenzela uhulumeni - benza njengoba kulindelekile.
Kulisiko lapho inkohlakalo, ukuqasha ngokwezihlobo kanye nokuqashwa ngokwamandla athile kungabekezeleki, futhi izinyathelo zithathelwa labo abahlukumeza amandla abo noma abantshontsha imali kahulumeni.
Kusuka ngaqala ehhovisi, sesakhe umthamo ehhovisini likaMongameli nanoma ikuphi embusweni ukusheshisa inqubekelaphambili ukuqeda uhlu lwezinguquko eziphuthumayo.
Sesisungule Ihhovisi Eliphethe Imisebenzi, Ingxenye Yengqalasizinda Notshalomali kanye Nosizo Lwenqubomgomo Nocwaningo ukubhekana nezithiyo ukuguqula nokwenza ngcono ukusebenza kukahulumeni.
Lezi zingxenye zisebenza ngokusondelene neKhomishana KaMongameli Yengqalasizinda, i-InvestSA kanye neqembu i-Ease of Doing Business Task Team ukususa izithiyo zotshalomali kanye nokukhula nokuqinisekisa ukuthi uhulumeni utshengisa inqubekelaphambili ebonakalayo ngokushesha.
Ngemishini esebenza kahle esifakiwe esikhungweni sikahulumeni, sizogxila ezinguqukweni eziphuthumayo bese singenelela lapho kunesidingo ukuqinisekisa ukuqalwa komsebenzi.
Sizithola njengabantu baseNingizimu Afrika sikumzuzu wokuzinqumela emlandweni wethu.
Yisikhathi esinzima nesokungatshazwa, kodwa futhi isikhathi esiphuphuma amathuba amahle.
Eminyakeni emibili edlule, sisebenze ngokubambisana ukwakha isisekelo senqubekelaphambili.
Manje isikhathi sokuthi sakhe isisekelo, sibumbane, sisebenze, sibekezele.
Angeke siyekelele ikusasa lethu ekungabazeni, noma ekulahleni ithemba, noma ekuhlukaneni.
Sizoqhuba siye phambili ukuthuthukisa izimpilo zabantu bethu.
Sizolamukela uguquko ngezandla ezifudumele.
Angeke sisabe lutho.
Sisenza kanjalo, sizokhumbula amagama akhuthazayo eculo lomculi ohlonishwa kakhulu eNingizimu Afrika, uBaba uJoseph Shabalala, umsunguli we-Ladysmith Black Mambazo, ukudlula kwakhe emhlabeni sikuzilele kuleliviki.
Ebhalwe ngesikhathi esihlukile, kodwa amagama akhe asakhuluma iqiniso:
"Singabhekana nezintaba eziphakeme,
Siwele ulwandle olugubhayo,
Kumele sithathe indawo yethu emlandweni,
Bese siphile ngesithunzi,
Sisakhuphuka ukufika lapho siya khona
Impilo entsha isiqalile."